Siyaasadda Archives - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Uganda: Dawladdu waxay ku dari doontaa waxbarashada nabadda manhajka dugsiga
Waxaa laga yaabaa 29, 2022 0
Iskuulada dalka Uganda ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan barida waxbarashada nabada heer walba laga bilaabo dugsiyada hoose, dhexe iyo jaamacada ha ahaato maaddo ama mowduuc tafatiran oo kamid ah maaddooyinka hadda la barayo. [sii wad akhriska…]
Qaado sahan 10-daqiiqo ah si aad gacan uga geysato qaabaynta siyaasadda caalamiga ah ee taageerta waxbarashada nabadda
Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda, isagoo la tashanaya UNESCO, wuxuu taageerayaa hannaanka dib u eegista ee Talo soo jeedintii 1974 ee ku saabsan waxbarashada fahamka caalamiga ah, iskaashiga iyo nabadda. Waxaan si adag kuugu dhiirigelinaynaa ka qaybgalka sahamintan, oo ah fursad muhiim ah oo aad codkaaga ugu biirin karto siyaasadda caalamiga ah ee taageerta waxbarashada nabadda. Waqtiga kama dambaysta ah ee jawaab celinta waa Maarso 1. [sii wad akhriska…]
Fursad gaar ah oo lagu soo noolaynayo heshiis caalami ah oo ku saabsan waxbarashada nabadda iyo xuquuqda aadanaha (UNESCO)
Shirka Guud ee UNESCO waxa uu si rasmi ah u ansixiyay soo jeedinta dib u eegis lagu sameeyo Talo soo jeedintii 1974 ee khusaysay Waxbarashada Fahamka Caalamiga ah, Iskaashiga iyo Nabadda iyo Waxbarashada ee la xidhiidha Xuquuqda Aadanaha iyo Xorriyadaha Asaasiga ah. Talo soo jeedinta dib loo eegay waxa ay ka tarjumi doontaa fahamka horumaray ee waxbarashada, iyo sidoo kale khataraha cusub ee nabadda, xagga bixinta heerarka caalamiga ah ee horumarinta nabadda iyada oo loo marayo waxbarashada. Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda ayaa gacan ka geysanaya horumarinta qoraal farsamo oo taageeri doona habka dib u eegista. [sii wad akhriska…]
Siyaasadda Kooban: iTalking Guud ahaan Jiilasha ku saabsan Waxbarashada Kolombiya
Laga bilaabo Ogosto ilaa Noofambar 2021, Fundación Escuelas de Paz waxa ay abaabushay Madaxbanaanida Laatiin Ameerika ugu horraysa ee Wadahadalka Jiilka Waxbarashada (iTAGe) ee Kolombiya, iyada oo sahaminta doorka waxbarashada ee horumarinta ka qaybgalka dhalinyarada iyo dhaqanka nabadda, iyo sidoo kale fulinta Qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay 2250 oo ku saabsan Dhallinyarada, Nabadda iyo Amniga. [sii wad akhriska…]
South Sudan waxay bilawday 'Hagaaraha ku dhawaaqida Dugsiga Badbaadada' iyadoo taageero ka heleysa Save the Children si looga ilaaliyo dugsiyada isticmaalka militariga
Ku dhawaaqida Dugsiyada Badbaadada ah waa ballanqaad siyaasadeed oo ka dhexeeya dawladaha oo siiya waddammada fursad ay ku muujiyaan taageerada ka ilaalinta ardayda, macallimiinta, dugsiyada, iyo jaamacadaha weerarrada xilliyada dagaalka hubaysan; Muhiimadda ay leedahay sii wadida waxbarashada inta lagu jiro iskahorimaadyada hubeysan; iyo hirgelinta tillaabooyin la taaban karo oo lagu joojinayo adeegsiga militariga ee dugsiyada. [sii wad akhriska…]
Shirkii harooyinka waawayn ayaa lagu baray waxbarashada nabadda ee dugsiyada (Uganda)
Shirka Caalamiga ah ee Gobolka Harooyinka Weyn ayaa ka codsaday Wasaaradda Waxbarashada iyo Xarunta Horumarinta Manhajka Qaranka ee Uganda in waxbarashada nabadda lagu daro manhajka qaranka. [sii wad akhriska…]
Itoobiya waxay la saxiixatay UNESCO heshiis ku saabsan in jaamacadaha laga siiyo waxbarasho nabadeed
Wasaaradda Sayniska iyo Tacliinta Sare ee Itoobiya iyo UNESCO ayaa kala saxiixday heshiis fududaynaya waxbarashada nabadda ee jaamacadaha oo diiradda lagu saaray kobcinta hababka xallinta khilaafaadka, ka hortagga khilaafaadka, iyo kor u qaadista tayada waxbarashada. [sii wad akhriska…]
Malawi: Wasiirka Waxbarashada ayaa soo jeediyay Hordhaca Waxbarashada Nabadda ee Dugsiyada
Wasiirka Waxbarashada Madaniga iyo Midnimada Qaranka Timothy Pagonachi Mtambo ayaa ka codsaday soosaarayaasha manaahijta dugsiyada hoose iyo sare inay sii sahamiyaan ku dhaqanka Waxbarashada Nabadda ee heerarka hoose iyo sare. [sii wad akhriska…]
Manhajka cusub ee dugsiga hoose ee Spain si loogu daro waxbarashada nabadda
Sinnaanta jinsiga, waxbarashada nabadda, waxbarashada isticmaalka mas'uuliyadda leh iyo horumar waara, iyo waxbarashada caafimaadka, oo ay ku jirto caafimaadka galmada-saamaynta leh, waa qaar ka mid ah mabaadi'da barbaarinta ee manhajka waxbarashada aasaasiga ah ee cusub oo ay Dowladda Spain u diyaarineyso 2022/21 sanad dugsiyeedka. [sii wad akhriska…]
Iskuullo wanaagsan oo loogu talagalay dimuqraadiyadda dhibaatada leh
Qeybtaan, Jon Valant wuxuu ku doodayaa in nidaamka iskuulka ee maanta aan ku leenahay Mareykanka - iyo fikirkayaga iskuul wanaagsan - uusan ku habbooneyn baahiyaha waqtigeenna. [sii wad akhriska…]